The Saem x SEVENTEEN ရဲ့ Collaboration အသစ် Lettering Lipbalm Set | CosmeticMyanmar
Home » Article » The Saem x SEVENTEEN ရဲ့ Collaboration အသစ် Lettering Lipbalm Set
The Saem ပရိသတ်တွေရော Carat တွေရောအတွက် သတင်းထူးလေးလာပါပြီ၊ အဲဒါကတော့ The Saem x SEVENTEEN ကနေအသစ်ထုတ်လုပ်မယ့် Lettering Lipbalm Set လေးရဲ့အကြောင်းပါ။ ဆောင်းတွင်းလည်းဝင်တော့မယ့်အခုလိုအချိန်မှာ lipbalm set လေးကို preorder ဖွင့်ပေးလိုက်တာမို့ အချိန်ကိုက်ပါပဲလို့ဆိုရမှာပါ။
ဒီ Lettering Lipbalm set လေးကအရင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Handcream set လိုပါပဲ၊ ဘူးလေးတွေအပေါ်မှာ SEVENTEEN member တစ်ယောက်စီရဲ့ပုံလေးတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး photocard လေးတွေလည်းလက်ဆောင်ပါဝင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Lettering Lipbalm လို့နာမည်ပေးထားရတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ ဒီ lipbalm လေးတွေပေါ်မှာ SEVENTEEN member တစ်ယောက်ချင်းစီကနေရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ special message လေးတွေပါဝင်နေလို့ပါ။ ပြီးတော့ lipbalm လေးတွေရဲ့အနံ့နဲ့အရသာကလည်း member တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အနံ့လေးတွေဖြစ်တာမို့ Carat တွေအတွက်တော့ ကိုယ့် bias ရဲ့ lipbalm လေးကိုမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
ဒီ Lettering Lipbalm Set မှာပါတဲ့ special message နဲ့ အနံ့လေးတွေကတော့
1. Scoups x Blueberry (Together)
2. Jeonghan x Shea Butter (Honest)
3. Joshua x Strawberry (Dream)
4. Jun x Vanilla (Happy)
5. Hoshi x Green Tea (Hope)
6. Wonwoo x Aloe (Positive)
7. Woozi x Orange (Harmony)
8. The8 x Honey (Faith)
9. Mingyu x Olive (Confidence)
10. DK x Peppermint (Smile)
11. Seungkwan x Avocado (Passion)
12. Vernon x Rose (Love)
13. Dino x Grape (Challenge) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ SEVENTEEN member တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ တစ်ကယ်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့ အနံ့နဲ့ message လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် Carat တွေတော့ဝယ်ချင်နေမှာအသေအချာပါ။
ဒီ Lettering Lipbalm Set ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခါတိုင်းလို The Saem ကနေတိုက်ရိုက်ဝယ်ရမှာမဟုတ်လဲ Makeastar website ကနေ preorder တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ collaboration က Makeastar နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တာဆိုတော့ Makeastar မှာပဲ အခု စက်တင်ဘာ ၂၁ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့အတွင်း order တင်တဲ့သူတွေကိုသာ ရောင်းချသွားမှာလို့ကြေငြာထားပါတယ်။ ဒီ Lettering Lipbalm Set လေးက $58.30 ဖြစ်ပြီးတော့ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ Makeastar website ကနေတစ်ဆင့် preorder မှာလို့ရပါတယ်ဆိုတာကို သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
References : https://www.makestar.co
Image source : https://www.makestar.co
Tags: Lip Balmthe saem